Bit By Bit - ဆိုင်ရာကိုယ်ကျင့်တရား - 6.5 နှစ်ဦးကျင့်ဝတ်ဆိုင်ရာမူဘောင်
သုတေသနလုပ်ငန်းကျင့်ဝတ်နှင့် ပတ်သက်. အများစုမှာဆွေးနွေးငြင်းခုံလက်ငင်းအကျိုးသက်ရောက်မှုနှင့် deontology အကြားသဘောထားကွဲလွဲမှုများမှလျှော့ချပေးပါတယ်။
လက်ငင်းအကျိုးသက်ရောက်မှုနှင့် deontology: ဤလေးပါးကျင့်ဝတ်ဆိုင်ရာအခြေခံမူများအကြီးအကျယ်နှစ်ခုထက်ပိုသောစိတ္တဇကျင့်ဝတ်ဆိုင်ရာမူဘောင်ကနေဆင်းသက်လာသူတို့ကိုယ်သူတို့ဖြစ်ကြသည်။ သငျသညျအလားအလာတခုကျင့်ဝတ်အဆုံးအောင်မြင်ရန်သိက္ခာမဲ့နည်းလမ်းကိုသုံးနိုငျသောအခါ: ကသငျသညျခွဲခြားသတ်မှတ်ပြီးတော့အကြောင်းတစျခုသုတေသနကိုကျင့်ဝတ်အတွက်အခြေခံအကျဆုံးတင်းမာမှုများ၏ကျိုးကြောင်းဆင်ခြင်ကူညီပေးပါမည်ကြောင့်ဤမူဘောင်ကိုနားလည်ခြင်းအထောကျအကူဖြစ်ပါတယ်။
ဂျယ်ရမီ Bentham နှင့်ယောဟန် Stuart Mill ၏လုပျငနျးအတွက်အမြစ်များသည့်လက်ငင်းအကျိုးသက်ရောက်မှု, ကမ်ဘာပျေါတှငျပိုကောင်းပြည်နယ်များမှဦးဆောင်လမ်းပြတဲ့လုပ်ရပ်တွေကိုယူပြီးအပေါ်အလေးပေး (Sinnott-Armstrong 2014) ။ ဟန်ချက်ညီအန္တရာယ်နှင့်အကျိုးအမြတ်အပေါ်အလေးပေးသောကောင်းတဲ့, ၏နိယာမ consequentialist တှေးအချေါကိုနက်ရှိုင်းစွာအမြစ်တွယ်သည်။ အခြားတစ်ဖက်တွင်, ဧမာနွေလ Kant ၏လုပျငနျးအတွက်အမြစ်များသည့် deontology, မိမိတို့အကြိုးဆကျ၏လွတ်လပ်သော, ကျင့်ဝတ်တာဝန်အပေါ်အာရုံစိုက် (Alexander and Moore 2015) ။ သင်တန်းသားများ၏ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်အပေါ်အလေးပေးသောလူပုဂ္ဂိုလ်များကိုလေးစား၏နိယာမ, နက်နက်ရှိုင်းရှိုင်း deontological စဉ်းစားတွေးခေါ်၌အမြစ်တွယ်လျက်ရှိသည်။ နှစ်ခုမူဘောင်ခွဲခြားဖို့တစ်ဦးကမြန်မြန်ဆန်ဆန်နဲ့ရေနံစိမ်းလမ်း consequentialists ကြီးစွန်းနှင့် deontologists နည်းလမ်းများအပေါ်အာရုံစူးစိုက်အပေါ်အာရုံစူးစိုက်သည်။
အဲဒီနှစျခုမူဘောင်ကွာခြားနိုင်ပါတယ်ဘယ်လိုကြည့်ဖို့, သဘောတူချက်စဉ်းစားပါ။ နှစ်ဦးစလုံးမူဘောင်သဘောတူချက်ကိုထောကျပံ့ဖို့အသုံးပြုပေမယ့်ကွဲပြားခြားနားတဲ့အကြောင်းပြချက်များအတွက်နိုင်ပါတယ်။ သဘောတူချက်အဘို့အဖြေ consequentialist အငြင်းအခုံကစနစ်တကျစွန့်စားမှုနှင့်မျှော်လင့်အကျိုးကျေးဇူးဟန်ချက်မျှအောင်ပြုလုပ်ပေးမပါဘူးသုတေသနတားမြစ်ခြင်းဖြင့်သင်တန်းသားများထိခိုက်မှုကိုကာကွယ်တားဆီးဖို့ကူညီပေးသည်ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်သင်တန်းသားများအဘို့မကောင်းတဲ့ရလဒ်တွေတားဆီးကူညီပေးသည်ဖြစ်သောကြောင့်တစ်နည်း, consequentialist စဉ်းစားတွေးခေါ်အသိပေးသဘောတူညီခကျြကိုထောကျပံ့မညျဖွစျသညျ။ သို့သော်အသိပေးထားသောသဘောတူခွင့်ပြုချက်အဘို့အ deontological အငြင်းအခုံသူမ၏သင်တန်းသားများ၏ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ကိုလေးစားလိုက်နာရန်သုတေသီရဲ့တာဝန်အပေါ်အာရုံစိုက်။ ဤအချည်းကပ်ပေးထား, စင်ကြယ်သော consequentialist စင်ကြယ်သော deontologist မစုံသော်လည်းအဘယ်သူမျှမစွန့်စားမှုရှိ၏တဲ့ setting ကိုအတွက်သဘောတူချက်များအတွက်လိုအပ်ချက်ရှိသောကြွေးမြီများကိုတင်ပြရန်ဖို့ဆန္ဒရှိဖြစ်လိမ့်မယ်။
လက်ငင်းအကျိုးသက်ရောက်မှုနှင့် deontology နှစ်ဦးစလုံးအရေးကြီးသောကျင့်ဝတ်ဆိုင်ရာထိုးထွင်းသိမြင်ဆက်ကပ်, ဒါပေမယ့်အသီးအသီးစိတ်ပျက်ဖွယ်အစွန်းခေါ်ဆောင်သွားနိုင်ပါသည်။ လက်ငင်းအကျိုးသက်ရောက်မှုဘို့, အဲဒီအစွန်းရောက်မှုကိစ္စများထဲမှတစ်ခုအစားထိုးဟုခေါ်ဝေါ်ခြင်းကိုခံရနိုငျတယျ။ ကိုယ်တွင်းကလီစာတွေကိုပျက်ကွက်ခြင်းနှင့်အဘယ်သူ၏ကိုယ်တွင်းအင်္ဂါအားလုံးငါးယောက်ကိုကယျတငျနိုငျတစျခုကျန်းကျန်းမာမာလူနာများ၏သေဆုံးငါးလူနာသူဆရာဝန်တစ်ဦးဆိုပါစို့။ အချို့သောအခြေအနေများအောက်တွင်တစ်ဦး consequenalist ဆရာဝန်ခွင့်ပြု-နှင့်ပါလိမ့်မည်ပင်လိုအပ်-အားမိမိကိုယ်တွင်းအင်္ဂါရယူဖို့ကျန်းမာတဲ့လူနာသတ်ကြလော့။ ကြီးစွန်းပေါ်မှာဤပြီးပြည့်စုံအာရုံ, နည်းလမ်းများနှင့် ပတ်သက်. မရှိဘဲ, ချို့ယွင်းချက်ဖြစ်ပါတယ်။
အလားတူပဲ deontology လည်းထိုကဲ့သို့သော Timebomb ဟုခေါ်တွင်စေနိုင်ကြောင်းကိစ္စတွင်၌ရှိသကဲ့သို့အဆင်မပြေအစွန်း, ခေါ်ဆောင်သွားနိုင်ပါသည်။ လူသန်းပေါင်းများစွာကိုသတ်လိမ့်မည်ဟုတစ် ticking timebomb ၏တည်နေရာကိုသိရှိသူတစ်ဦးအကြမ်းဖက်သိမ်းပိုက်ခဲ့သူတစ်ဦးကရဲအရာရှိတစ်ဦးဆိုပါစို့။ တစ်ဦးက deontological ရဲအရာရှိဗုံး၏တည်နေရာထုတ်ဖော်သို့အကြမ်းဖက်လှည့်စားနိုင်ရန်အတွက်အိပ်မဟုတ်ဘူး။ နည်းလမ်းပေါ်မှာဤပြီးပြည့်စုံအာရုံ, ကြီးစွန်းပတ်သတ်ပြီးမပါဘဲလည်းချို့ယွင်းချက်ဖြစ်ပါတယ်။
လက်တွေ့တွင်အများဆုံးလူမှုရေးသုတေသီများကလုံးလုံးလြားလြားနှစ်ခုကျင့်ဝတ်ဆိုင်ရာမူဘောင်တစ်ခုရောနှောလက်ခံ။ ကျင့်ဝတ်ကျောင်းများ၏ဤအရောနှောကိုသတိပွုမိအဘယ်ကြောင့်များစွာသောကျင့်ဝတ်ဆိုင်ရာဆွေးနွေးငြင်းခုံ-သောပိုပြီး consequentialist နေသောသူတို့ကိုနှင့်ပိုပြီး deontological-don't နေသောသူတို့ကိုအကြားဖြစ်လေ့ရှင်းလင်းရန်ကူညီပေးသည်အများကြီးတိုးတက်မှုများပါစေ။ consequentialists ကြီးစွန်းတိုင်အောင်, နည်းလမ်းစိတ်ပူနေသော deontologists မှယုံကြည်နေကြသည်မဟုတ်ကြောင်းငြင်းခုံ ပတ်သက်. အငြင်းပွားမှုများကိုဆက်ကပ်သောကွောငျ့ဤအငြင်းခုံမှုများမရှိသလောက်ဖြေရှင်းရန်။ အလားတူပဲ deontologists ကြီးစွန်းအပေါ်အာရုံစူးစိုက်ကြသူ consequentialists မှယုံကြည်နေကြသည်မဟုတ်သောနည်းလမ်းများအကြောင်းကိုငြင်းခုံပူဇော်ဖို့လေ့ရှိပါတယ်။ consequentialists နှင့် deontologists အကြားအငြင်းပွားမှုများညဉ့်၌ဖြတ်သန်းနှစ်ခုသင်္ဘောများကဲ့သို့ဖြစ်ကြ၏။
လူမှုရေးသုတေသီများအစိုင်အခဲကငျြ့တရား, တစ်တသမတ်တည်းဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်နှင့်လက်ငင်းအကျိုးသက်ရောက်မှုနှင့် deontology ၏လွယ်ကူသော-to-လျှောက်ထားရောစပ်ဖို့အတွက်ဤငြင်းခုံမှုများမှတစျခုမှာဖြေရှင်းနည်းဖြစ်လိမ့်မယ်။ ကံမကောင်းစွာပဲ, အဲဒီဖြစ်ပျက်ဖို့မဖြစ်နိုင်ပါဘူး; ဒဿနပညာရှင်တစ်ဦးအချိန်ကြာမြင့်စွာသောဤပြဿနာများအပေါ်အလုပ်လုပ်ကိုင်ကြပြီ။ ထိုကွောငျ့, ငါအရေးယူမှု၏တစ်ခုတည်းသောသင်တန်းကိုကျွန်တော်တို့ကိုက်ညီမှုမရှိအမြစ်နှင့်ရှေ့ဆက် muddle မှအလုပ်လုပ်ဖြစ်ကြောင်းဝန်ခံဖို့ဖြစ်ပါတယ်လို့ထင်ပါတယ်။